Daawo Sawirada Iskuul caan ah oo Muqdisho ku yaalla oo 21-kii sano bur bursanaa oo dayactir lagu bilaabay. - iftineducation.com
Daawo Sawirada Iskuul caan ah oo Muqdisho ku yaalla oo 21-kii sano bur bursanaa oo dayactir lagu bilaabay.
aadan21 / January 6, 2013
iftineducation.com – Iskuulka Xamar Jadiid oo dhaca dhanka waqooyi ee Suuqa Bakaaraha 21-kii sano ee tagtayna ahaa goob qashanka lagu qubo ayaa waxaa laga bilaabay howlo dib loogu howl gelinayo Iskuulka si uu u anba qaado howlihii wax barasho ee loogu tala galay.
Iskuulkaasi waxaa laga sameeyay god weyn oo ujedkiisu yahay in qashanka 20 sano jirsaday lagu aaso iyada oo qoditaankiisa oo waqti dheer qaatay kadib lagu guuleestay lana bilaabay in qashankii lagu aaso si bilicda halka uu ku yaalo ay usoo baxdo kadibna dhismihiisa loo bilaabo.
Gudoomiyaha degmada Howl-wadaag Maxamed Abuukar Cali oo shabakadaan Allbanaadir.com kula hadlay bartamaha Iskuulka xilli Shaqa culus ay ka socotay ayaa waxa uu sheegay in hadafkoodu uu yahay dib u nooleynta wax barashada si taa loo garana Iskuulka dib u dhiskiisa ay xoogga saarayaan.
Waxa uu intaa ku daray gudoomiyuhu in wax kasta oo shacabka degmada Howl-wadaag muhiim u ah ay sidaan oo kale ugu dhiiranayaan qabashadooda, isaga oo tusaale usoo qaatay howlaha dar darta leh ee maamulkiisu uu kahayo Suuqa Bakaaraha halkaasi oo ay ka muuqato dowladnimada maadaama sharciga iyo kala danbeynta ay ku soo celiyeen oo howlaha ganacsiga suuqaasi uu hada marayo halkii ugu wanagsanaa mudo 22-sano ah.
Waxa uu sheegay in howlaha intaa la’eg ee baaxadoodu balaarantahay ay la kaashanayaan oo kali ah ganacsatada Soomaaliyeed iyo gobalka Banaadir hasa yeeshee aysan jirin hey’ad ka caawisa fulintooda.
Dhanka kale waaa heer wanaagsan maraya ololaha wadooyinka Bakaaraha lagu waasicinayo ee uu maamulka Howl-wdaag wado iyada oo wadooyinkii ugu muhiimsanaa Suqaasi lafuray oo shacabku ay si aad ah u soo dhaweeyen.
Shacabka Soomaaliyeed ayaan labaatankii sano ee tagtay aan arag maamullo wax u qabnaya waxa ayna dadka suuqaasi ka ganacsada iyo kuwa ka dukaameesta ay is weydiinayaan hadii maamlo sidaan oo kale ah uu suuqu horay u heli lahaa in dhibaataba aysan ka dhacdeyn.
Cabdifatax Yare Oo qaab muuqaal ah oo qurux badan usoo qaaday Heesta Sida Laba Walaalaa Daawasho wacan.
Aroos Ay Ka Dhacaday Arin La yaab leh Iyo Lamaanayaal Go’aan saday In ay Ka Tusaale Qaataan + Video